गण्डकीमा संसद स्थगनपछि सोमबार कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्दै, एमाले पनि सहभागी हुने – Nepal Press
गण्डकीमा संसद स्थगनपछि सोमबार कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्दै, एमाले पनि सहभागी हुने
एमाले सांसद भन्छन्- सभामुख जस्तो भागेर हिड्दैनौं, आफ्ना कुरा बैठकमा राख्छौं
२०७८ वैशाख १९ गते १९:३८
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको कार्य व्यवस्था समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । बैशाख १५ गते सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरेपछि समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
बैठक स्थगनपछि डाकिएको समितिको बैठकमा सभामुख नै अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । बैठक नबस्दा स्थगित प्रदेश सभा बैठक कहिले सुरु हुन्छ टुंगो लाग्न सकेको थिएन । परामर्श समितिको आइतबार बस्ने बैठकले संसद कहिले सुरु हुने निक्र्यौल गर्नेछ ।
प्रदेश सभामा पेस भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मतदानकै दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सभामा अनुपस्थित भएर ‘गायब’ भएपछि सभामुख अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
मतदानका दिन आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदनको आधारमा सभामुख अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।
तर, सोमबार डाकिएको कार्य परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने सांसद कृष्ण थापाले जानकारी दिए । ‘सभामुखको सचिवालयबाट भोलि (सोमबार) ११ बजे बैठक छ भनेर खबर आएको छ । सदनबाट, कार्य व्यवस्थाबाट भाग्दैनौं, सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने ।
आफूहरु सभामुखजस्तो ‘डरपोक’ नभएकाले सहमति र वार्ताबाटै अघि बढ्ने सांसद थापाले सुनाए । ‘हामी डराएर भाग्ने पार्टी होइनौं, जिम्मेवार पार्टी हौं,’ उनले भने, ‘सबै कुरा हामी बैठकमै भन्न सक्छौं नि ! सभामुखजस्तो भागेरजस्तो भागेर हिँड्ने पक्षमा छैनौं ।’
गण्डकीको ‘खेलकुद’ : सरकार नढल्ने संकेतपछि सभामुखले बीचमै फुके सिटी !
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १९ गते १९:३८